'प्रचण्डलाई नेतृत्वबाट हटाएरै छाड्छौं'
Friday, 20 April 2012 09:22	नागरिक
(22 votes, average 3.23 out of 5)
जेठ १४ गते नजिकिँदै सर्वसाधारण नयाँ संविधानको आशामा छन्। तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत माओवादी पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वले समयमै संविधान जारी नहुने खतरा उत्तिकै छ। माओवादीभित्रैबाट वर्तमान सरकार र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध सशक्त विरोधमा उत्रिएको मोहन वैद्य पक्षधर नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य नेत्रविक्रम चन्द बिहीबार जाजरकोटमा समानान्तर समिति गठन गरी काठमाडौं फर्कदै थिए। सोही क्रममा माओवादीभित्रको विवाद, अब बन्ने संविधानबारे चन्दले नेपालगन्जमा नागरिककर्मी रुद्र खड्कासँग खुलेरै कुरा गरे।
जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्ने बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रै द्वन्द्व भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशले नयाँ संविधान पाउला त?
जेठ १४ गते संविधान आउँछ भन्ने लाग्छ। तर हामीले यहाँनेर बु‰नुपर्ने कुरा के छ भने अब बन्ने संविधान कस्तो हुने भन्ने नै हो। हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री बाबुराम तथा कांग्रेस, एमालेले २०४७ सालकै संविधान दोहोर्‍याउन खोजेका छन्। हाम्रो चिन्ता के हो भने जेठ १४ मा बन्ने संविधान २०४७ सालको भन्दा फरक हुनुपर्छ। खालि, राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र लेखेरमात्र हुँदैन। नयाँ संविधानमा जनताका अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। हामीले जनताको हकअधिकार सुनिश्चतताका लागि कुरा उठाएका हौं। हाम्रो छलफलले संविधान निर्माणमा कुनै अवरोध पुर्‍याउने होइन।
संविधानमा तपाईंहरू (वैद्य समूह) ले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुने सम्भावना छ त?
हामीलाई अहिले यही चिन्ता छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुरामको व्यवहारले जनपक्षीय संविधान बन्लाजस्तो छैन। उनीहरू २०४७ सालको संविधानलाई अर्को संस्करणको रुपमा जारी गर्ने दाउमा छन्। तर हामी त्यसो हुन नदिन पार्टीभित्र र बाहिर चर्को रुपमा कुरा उठाइरहेका छौं। स्वीकृत पार्टीको निर्णयबाट पलायन भएका प्रचण्ड र बाबुरामलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गर्दैछौं। यति गर्दा पनि जनताका हकअधिकार ग्यारेन्टी नगरी संविधान जारी गरिए हामी त्यो संविधान मान्दैनौं। जसले जारी गरेको हो, उसैले मान्दैन। संविधानमा जनयुद्व, जनमुक्ति सेना तथा महिला र दलितका सवाल समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
तपाईंले प्रचण्ड र बाबुरामलाई पलायनवादीको आरोप लगाउनुभयो, कसरी?
पहिलो कुरा, प्रचण्ड र बाबुरामले पार्टीको स्वीकृत नीति मानेका छैनन्। जसरी जनयुद्व सुरु गरिएको थियो, त्यसयता उनीहरू निकै फेरिएका छन्। त्यसबाट यतिखेर स्वयं पार्टी र जनतालाई समस्या परेको छ। अर्को कुरा, जनमुक्ति सेनालाई समायोजनको नाममा विघटन गर्ने काम भयो। वृहत शान्ति सम्झौतादेखि नै जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्ने भनिएको हो। तर प्रचण्ड, बाबुराम तथा कांग्रेस र एमालेले समायोजनको अर्थ नबुझी जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्रीकरण गर्ने तथा माओवादीलाई सखाप पार्ने काम गरे। हुँदाहुँदा पार्टीमा क्रान्तिकारी भावना बचाइराख्नुपर्छ भन्ने हामीजस्तालाई जडसूत्रवादी, अराजक भन्ने थाले। यी तमाम घटनाक्रमले प्रचण्ड र बाबुराम क्रान्तिबाट पछि हटेका छन्। पलायन भएका छन्।
तपाईंकै शब्दमा प्रचण्ड, बाबुराम पलायन भइसकेपछि उनैले नेतृत्व गरेको पार्टीचाहिँ कसरी क्रान्तिकारी भइरहन सक्छ?
प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्व असफल भइसक्यो। अब पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड लायक छैनन्। हामी पनि पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं। प्रचण्ड र बाबुरामले नियतवश पार्टी, जनता र जनमुक्ति सेनाविरुद्व निर्णय गरिरहेका छन्। नेतृत्व चुकेको भए सम्झाउन सकिन्थ्यो। अहिले जेजति भइरहेको छ, सबै जानेरै-बुझेरै भइरहेको छ।
पार्टी नेतृत्व असफल भइसकेको कुरा गर्नुभयो। तत्काल अध्यक्ष फेर्न सक्ने अवस्थामा पनि देखिनुहुन्न। अबको विकल्प माओवादी विभाजन नै हो?
हामीले त्यत्ति परसम्म सोचेका छैनौं। पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको छैन। अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान असफल भएको नेतृत्वलाई च्यूत गर्ने हो। हामीलाई लाग्छ, ढिलोचाँडो त्यो सफल हुन्छ। असफल नेतृत्वविरुद्व पार्टी भित्र र बाहिर आन्दोलन चलाइरहेका छौं। पार्टीको स्वीकृत नीति लागू गराउने प्रयासमा छौं। प्रचण्डलाई हटाएरै छाड्छौं।
प्रधानमन्त्री बाबुराम र अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियतामा लामो समयदेखि रोकिएको लडाकु व्यवस्थापनको काम सम्पन्न हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा पार्टीले बाबुराम, प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनुपर्ने होइन र?
जनमुक्ति सेनाका योद्धाले सम्मान पाएको कतै देख्नुभएको छ? पार्टीको माग १९ हजार जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हो। प्रचण्ड, बाबुरामले साढे ६ हजारलाई समायोजन गर्ने सम्झौता गरे। तर अहिले २५ सय जनमुक्ति सेना समायोजन हुने अवस्था सिर्जना भयो। जसले गर्दा १०/१० वर्ष लडेका साथीहरू निराश छन्। यो त सेना समायोजन भएन नि? सिधै जनमुक्ति सेनाको विघटन हो। प्रचण्ड, बाबुरामले न जनमुक्ति सेनाका साथीलाई सन्तुष्ट पारे, न आफंैले सम्झौता गरेअनुसार साढे ६ हजारलाई समायोजन गरे। यस्तो अवस्थामा पार्टीले धन्यवाद दिने कुरै होइन। यो पार्टीका लागि घात हो। हाम्रो प्रस्ट बुझाइ हो- प्रचण्ड र बाबुरामले घुँडा टेके। जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजन हुन नसक्नु विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत हो।
माओवादीका कतिपय नेता र अन्य व्यक्तिले तपाईंहरूलाई युद्व गर्ने मानसिकता बनाइरहेको आरोप लगाउँछन् नि?
कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता र जनतको चाहना युद्व होइन। जनता जहिले पनि शान्तिपूर्वक बाँच्न चाहन्छन् भन्ने हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं। तर हामीले के पनि बिर्सनुहुँदैन भने अन्याय बढ्दै गयो भने जनता लामो समय चुप लागेर बस्दैनन्।
ye netre kya ko kursi khosne mattara ho ki k ho bikas garne hoina talai pani pradhan mantri banna man chha ki kya ho